लोकसेवा टिप्स – Jana Prashasan
काठमाडौँ : शिक्षण अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को परीक्षामा अबदेखि बस्तुगत प्रश्न मात्रै सोधिने भएको छ।यसअघि ४० प्रतिशत बस्तुगत र ६० प्रतिशत विषयगत प्रश्न सोधिने गरिएकोमा पाठ्यक्रम परिवर्तन गर्ने निर्णय भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगको...
कर्णाली : कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले खोलेका पाँचौँ तहका प्राविधिक तथा अप्राविधिक पदको लिखित परीक्षा स्थगन गरिएको छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा आयोगका नाममा जारी गरेको उत्प्रेषण आदेशानुसार यही फागुन १४ देखि चैत २६ गतेसम्म...
कर्णाली : कर्णाली प्रदेश लोकसेवा आयोगले पहिलो पटक विज्ञापन खुलाएको छ । स्थायी पदपूर्ति गर्न आयोगले आज कर्मचारीको विज्ञापन खोलेको हो । आयोगले प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सरकारी सेवाका पाँचौं तहका विभिन्न सेवा...
काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले नायब सुब्बा वा सो सरहको काठमाडौँ कार्यालयको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । अयोगले काठमाडौँ कार्यालयको विज्ञापनमा लिइएको लिखित परीक्षाको दोस्रो चरणको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । काठमाडौँ कार्यालयबाट विज्ञापन...
काठमाडौँ । लोक सेवा आयोगले नेपाल प्रहरी प्रहरी जवानको २०७७ फागुनमा लिएको लिखित परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । लिखित परीक्षामा ३६ हजार ७ सय २२ जना सहभागी भएकोमा सात हजार तीन सय २४...
भीम राना “जिज्ञासु” १. जापानी सम्राट नोरुहितोको राज्यभिषेक कहिले भएको हो ? (क) सन् २०१९ अक्टोबर २० (ख) सन् २०१९ अक्टोबर २२ (ग) सन् २०१९ अक्टोबर २४ (घ) सन् २०१९ अक्टोबर २६ (ख) सन्...